‘वडाको मुख्य समस्या भनेको ढल निकास हो’ : सैलेन्द्र श्रेष्ठ
उपत्यका छाड्न दिने कुनै निर्णय नभएको भन्दै भ्रमको पछि नलाग्न सरकारको आग्रह
इटहरी उपमहानगरले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब बराबर जोखिमभत्ता दिने
नेपालमा कोरोना तेस्रो चरणमा गएन, तर भारतबाट आउनेहरुबाट अझै खतरा
कोरोनाभाइरस : नेपालमा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका सबैको पहिचान सम्पन्न, सङ्क्रमणको जोखिम देखिएन
प्रदेश १ : कोरोनाको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० लाखको बिमा
कामधेनु सहकारीमा यस्तो छ टेण्डरको लफडा
‘वडाको मुख्य समस्या भनेको ढल निकास हो’ : सैलेन्द्र श्रेष्ठ
शुक्रबार २०, भदौ २०७६
सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वार्ड नं. ४ का वडाध्यक्ष सैलेन्द्र श्रेष्ठ वडामा सम्भावना देख्ने वडाध्यक्ष हुन् । वडावासीको कामको लागि निक्कै सक्रिय उहाँ वडाध्यक्ष भएसँगै वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोलगायतका पूर्वाधारको विकासमा लागि पर्नुभएको छ । उहाँसँग वडाको विकासको बारेमा न्युजलयका सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी :
आजभोली के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
भर्खरै २०७५/०७६ को बजेट सम्पन्न भएको छ । हामील नयाँ बजेटको सुरुवातमा छौं । केही दिनअघि बाढीले यो वडामा निक्कै क्षति पु¥याएको थियो । यो वडामा गछिया खोला, बुढि खोला, तेलिया खोला र भलुवा खोला रहेको हुँदा ती खोलाहरुले क्षति पु¥याएको ठाउँमा अनुगमन गरेर काम गरिरहेका छौं ।
वडाको विकासको अवस्था कस्तो छ ?
वडाको विकासको अवस्था राम्रो छ । हामी जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि वडाको विकास धेरै अगाडि बढिसकेको छ । विकास भन्ने कुरा एकै पटक हुने हैन । यसको लागि निरन्तर लागि परिरहनु पर्छ । हामी विकास गर्ने क्रममा छौं ।
वडाको विकासको लागि कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
जनताको मागअनुसार हामीले ढल निकासलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । यस्तै गछिया खोला र बुढि खोलामा तटबन्धनको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । र विभिन्न गाउँ बस्ती तथा टोलहरुमा बाटो नपुगेको ठाउँ सम्म बाटो पु¥याउने काम गरिरहेका छौं । हाम्रो वडालाई नमुना बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौं ।
यो वडाका आगामी योजनाहरु के–के छन् त ?
आगामी योजनाहरु धेरै छन् । जनताहरुबाट माग आएअनुसार सबै बस्तीहरुलाई समेट्ने गरि योजनाहरु तयार गर्दैछौं । वडाको पूर्वाधारहरुको विकाससँगै सामाजिक विकास गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकहरुका लागि कार्यक्रमहरु गर्ने योजना बनाएका छौं । यो वर्ष वडा स्तरीय वडाध्यक्ष गोल्डकप पनि सञ्चालन गर्न लागेका छौं ।
यो वडाको मुख्य समस्याहरु के–के छन् त ?
यो वडाको मुख्य समस्या भनेको ढल निकासा हो । यो वडामा धेरै घरहरु निर्माण भइरहेको र धेरै बस्तीहरु बसिरहेको हुनाले यो वडामा ढल निकासको समस्या धेरै छ । जनप्रतिनिधिहरु आउनुभन्दा अगाडिदेखि बसेको बस्तीमा यस्तो समस्या ज्यादा देखिएको छ । पहिला बाटो बनाइदिएर जग्गा बेचिने गरिन्थ्यो । त्यहाँ बिजुलीको पोल र तार पनि नलगाउने तथा ढल निकास पनि नलगाउने गरेको पाइयो । त्यसको कारणले अहिले बनेका घरहरुमा पानी पस्ने जस्ता समस्याहरु देखिन्छन् । हाम्रो यो वडामा भोल्टेज पनि कम भएको हुँदा हामी ट्रान्सफरमर पनि लगाउने तयारीमा छौं ।
के भयो भने वडाको विकास चाँडो हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
विकास गर्नका लागि वडाले मात्र गरेर नहुने रहेछ । वडाले गर्ने काम र जति सक्ने विकास गरिरहेको छ । केन्द« र प्रदेशबाट पनि वडालाई बजेट आयो भने हामीलाई विकास गर्न सहज हुनेथ्यो । हाम्रो वडामा पुराना र ठूला हुलाकी बाटोहरु पनि छन् । धेरै हुलाकी बाटाहरु बस्तीले मिचेर घर बनाइरहेका छन् । हामी जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै हुलाकी बाटोहरुको खोजी गरेर अहिले निकास दिँदै छौं । यसका लागि विभिन्न निकायहरुबाट सहयोग भयो भने चाँडो विकास हुन्थ्यो ।
वडाको विकासका लागि कोसँग के आग्रह र माग राख्नु भएको छ ?
वडाले माग राख्ने भनेको आफुभन्दा ठुलो निकायसँग हो । नगरले पनि हामीले राखेको मागहरु सकेसम्म पुरा गरेकै छ । नगर भन्दा माथि प्रदेश सरकार तथा केन्द्रिय सरकारसँग समेत माग गरेका छौं । केन्द्र्र्रिय सरकारबाट पनि केही बजेट प्राप्त भइरहेको सुचना पाइरहेका छौं । केन्द्रबाट अझै यो वडालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने यो वडा इटहरी नजिकको वडा हो र यस वडालाई धेरै खोलाहरुले घेरेको छ ।
अन्त्यमा आफ्ना वडावासीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
वडावासीहरुले जुन विश्वास र आशाका साथ हामीलाई यो स्थानमा पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि हामी आभारी छौं । हाम्रो कार्यकालमा हामी यो वडालाई अन्य वडाभन्दा फरक किसिमको बनाउन लागिरहेका छौं । हामीले अहिलेसम्म पनि वडाको विकास राम्रो गरिरहेका छौं । तपाइहरुले राखेको आशाहरु हामी पुरा गर्नेछौं ।
बन्धनले ग्राहकको मागअनुसारको गुणस्तरीय पिपिसि सिमेन्ट ल्याउँदैछ
‘जुटको आयात रोकेर खपतको क्षेत्र बढाउनुपर्छ’
‘पूर्वका ठूला परियोजनामा बन्धन सिमेन्ट प्रयोग गरिन्छ’
अब कोरोनाको परीक्षण विराटनगरबाटै
वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.ज्ञानेन्द्र गिरी नियुक्त
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबारे अफवाह फैलाउने दुई जना पक्राउ
धरानका मासु व्यवसायी लक्ष्मण मृत भेटिए